ဆေးရွက်ကြီးပြတိုက်, Museo del Tabaco - Sant ဂျူလီယာက de Loria
ဥရောပ အင်ဒိုရာ Sant ဂျူလီယာက de Loria
နေရပ်လိပ်စာ: Carrer ဆရာဝန်ပလောင်း, 17, Sant Julia က de Lòria, AD600, အင်ဒိုရာ
ဖုန်းနံပါတ်: +376 741 545
အဆိုပါသေးငယ်တဲ့ အင်ဒိုရာ၏ကျောင်းအုပ် ခရီးသွားများအထူးသဖြင့်တတ်နိုင်ဖို့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီး စျေးဝယ် , ဥရောပအကြီးမားဆုံး အပူစင်တာ နှင့်သင်တန်း၏, ထိုနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း ။ သို့သော်အင်ဒိုရာမသာသင်အံ့သြသွားသည်ဤမည်! Sant ဂျူလီယာက de Loria - သင်က၎င်း၏သမိုင်းထဲသို့ထိုးဖို့ဒီတိုင်းပြည်တိုးကိုကြည့်ချင်လျှင်, သင်ကျိန်းသေကျောင်းအုပ်ကြီး၏တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်မြို့သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။
ဆေးရွက်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း - ဒေသခံတစ်ဦးမြေမှတ်တိုင်အဖြစ် သူတို့နှင့်အတူနီးကပ်စွာအများအပြားမိသားစုလုပ်အား၏ဘဝနှင့်ဆက်စပ်သော။ Museo del Tabaco - Sant ဂျူလီယာက de Loria, အင်ဒိုရာမြို့၏အဓိကဆွဲဆောင်မှု။ ပြတိုက်၏ကနဦး 1999 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းက Zhulii Reig (Julia Reig), ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Reigate Zhulii ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ - အဘယ်သူ၏အဓိကရည်မှန်းချက် non-profit organization ကိုတည်ထောင်သူ, - ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အင်ဒိုရာ၏ ခေတ်မီနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်။ ပြတိုက်၏စိတ်ကူးရည်မှန်းချက်ကဒီဇာတ်လမ်းကိုစတင်ရှိရာစက်ရုံအဟောင်းရိုးကို restore လုပ်ဖို့-bits နှင့်အင်ဒိုရာအတွက်ဆေးရွက်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏သမိုင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအပိုင်းပိုင်းစုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပြတိုက် 1909 ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့အလုပ်စတင်ခဲ့ရာဟောင်းတစ်ဦးဆေးရွက်ကြီးစက်ရုံ၌ကျိန်းဝပ်ဖြစ်ပါတယ် - "။ Cal ရာဖေးလ်" ဟောငျး Reigate, ပိုကောင်းတဲ့အဖြစ်လူသိများ ပထမဦးဆုံးသင်လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏လုပျငနျးမှာပါဝင်နေတဲ့စက်တွေ, ဆေးရွက်ကြီးထုတ်လုပ်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်သည့်စက်ရုံ၏အသေးစိတ်ခရီးစဉ်လုပ်ဆောင်သွားရန်ဘယ်လိုမတူညီထုတ်လုပ်မှု XX ရာစု 30-ies အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလယ်ယာကာလ: ဧည့်သည်တစ်ဦးမတူညီကြ program ကိုတင်ပြကြသည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း, ထို Exposition ၏တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်ပြောဆိုမည်သူ: နှစ်ခုအသံဖြင့်လိုက်ပါသွားစက်ရုံတစ်လှည့်လည်။
အဆိုပါပြတိုက် Exposition လေးအုပ်စုများသို့ကွဲပြား:
ဆေးရွက်ကြီးလယ်ပြင်၌ဆေးရွက်ကြီး၏စိုက်ပျိုးမှု။ အရွက်ပြင်ဆင်ပါ။ သငျသညျ, ဆေးရွက်ကြီး၏အမျိုးပေါင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မည်သည့်ဆေးရွက်ကြီးလယ်ပြင်ပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်၎င်း၏စိုက်ပျိုးမှု၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှ, ရိတ်သိမ်း, သိမ်းဆည်းခြင်း, လာမယ့်ထုတ်လုပ်မှုဇာတ်စင်မှအရွက်၏ပြင်ဆင်မှုလိမ့်မည်။
အရွက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှု။ စက်ရုံတစ်ရုံအတွင်းအလုပ်။ အဆိုပါထိတွေ့မှု၏ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းစက်ရုံနှင့်စက်ရုံစီမံခန့်ခွဲမှုဒဏ်ငွေမှာ process ကိုစည်းရုံးရေး, အရွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ထွန်း။
ဆေးပြင်းလိပ်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှု။ ဆေးရွက်ကြီးထုတ်လုပ်မှုရှည်လျားတစ်ဦးကို manual ခက်ခဲအလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကအကောင်းဆုံးဆေးပြင်းလိပ်ယုံကြည်နေသည်ယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် - တဲ့ဆေးပြင်းလိပ်လက်ရှင်းပြီ။ ဒီနေရာတွင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုအဟောင်း tools များနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရ, ဆေးရွက်ကြီးအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာများအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာအတွက်ဆေးရွက်ကြီး။ သငျသညျစျေးကွက်၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှအကြောင်းကို, ဆေးရွက်ကြီး၏လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့စျေးကြီးအမျိုးပေါင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါပြတိုက်ကိုကြိုတင်မှာတွေ့ရှိနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောယာယီပြပွဲနှင့်ဖြစ်ရပ်များ, အိမ်ရှင်အဖြစ်ရာနှစ်ခုအခန်းပေါင်း, ခွဲဝေပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါဧည့်ဓာတ်ပုံဆရာများ၏အင်ဒိုရာမျက်စိတစ်ဦးကြည့်ယူနိုင်ရန်ကူညီကြလိမ့်မည်သည့်အနုပညာရှင် Pablo Picasso နဲ့ Rembrandt ဗန် Rijn အဖြစ်ကြီးမားသောဓာတ်ပုံကိုပြပွဲ၏အလုပ်ရှိပါတယ်တင်ပြခဲ့ကြသည်။
အကောင်းဆုံးကိုတဦးနှင့် အင်ဒိုရာ၏ပြတိုက် စနေနေ့မှအင်္ဂါနေ့ကနေ 20,00 နာရီ 10.00 ထံမှ၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်, တနင်္ဂနွေ 10.00 14.30 နာရီ မှစ. , ပြတိုက်တနင်္လာနေ့ပိတ်ထားသည်။ ဧည့်သည်၏နောက်ဆုံးအုပ်စုတစ်စုပိတ်ပြီးမတိုင်မီ 1.5 နာရီကြာသွားနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးအုပ်စု - 25 ကလူ။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်န်ဆောင်မှုများ, စျေးဆိုင်, တစ်ဦးကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုပြင်ပတွင်ကျန်ကြွင်း Wardrobe ။
သငျသညျကားတစ်စီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြတိုက်ရ: အကိုသြဒီနိတ် 42.464523, 1.491262 နှင့်အင်ဒိုရာ၏လမ်းကြောင်းအရေအတွက်က3ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်, ဇွန်လကနေစက်တင်ဘာလမှပြေး။ ဝင်ပေါက်အခကြေးငွေ: 30% လျှော့စျေးနှင့်အတူ5ယူရို 20 ကျော်လူဦးပင်စင်စားများ, ကျောင်းသားများနှင့်အုပ်စုများ၏ပြတိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ 8 အောက်မှာအသက်အနှစ်ကလေးများတာဝန်ခံအခမဲ့ပြတိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရဂ်ဂျူဗစ် - ဟိုတယ်
အထက် Barrakka ဥယျာဉ်
ဘဝါးခြေနင်းလယ်ထွန်စက် - အဘယ်အရာကိုဒီနွေရာသီမှာအရှိဆုံးဖက်ရှင်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်နည်း
အမြိုးသမီးမြားရဲ့အပေါ့ပါး chiffon နွေရာသီဘောင်းဘီဝတ်စုံ
ခိုခို Chanel ၏စတိုင်
Clindamycin - Analogues
ဆောင်းရာသီတွင်မုန်ညင်းနဲ့အတူသခွားသီးသုပ် - အရသာစပ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောချက်ပြုတ်နည်းများ
အတွင်းပိုင်းအတွက် modular ပုံစံ
စားပွဲပေါ်မှာ Laptop ကိုခေါက်
ဒိန်ချဉ်မုန့်ကိတ်မုန့် - အရသာကိတ်မုန် impregnation များအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
5 ရက်ကြာ Mono အဘိဓါန်-အစားအသောက်များတွင်
ခန်းမများ၏အတွင်းပိုင်းအတွက် Desktop ကိုအဖော်
နို့ဘီစကွတ် - စာရွက်
Eco လင်းမ်သည် Slim